Insulin > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
I-Rinsulin nph - imithetho yokusetshenziswa
Izinkinga ezinokwenzeka zokulawulwa kwe-insulin kuma-diabetes
Izinkinga ezingaba khona zokwelashwa kwe-insulin: izinhlobo, ukwelashwa nokuvimbela Ukwelashwa kwe-insulin kuyindlela yokwelapha uhlobo 1 lwesifo sikashukela futhi, kwezinye izikhathi, kwesibili. ...
Imiyalo yokusebenzisa i- "Lantus Solostar": ukwakheka, iziqondisi, intengo kanye nokubuyekezwa kwamakhasimende
I-Insulin Lantus Solostar: Imiyalo nokubuyekezwa I-Lantus ingesinye sezimpawu zokuqala ezingenasisekelo ze-insulin yomuntu. ...
Yikuphi okungcono, amaphilisi we-insulin noma kashukela?
Impilo kwi-insulin: kungani amaphilisi engcono kunemijovo, futhi ukudla kuyimpoqo? Amaphilisi noma imijovo? Le nkinga kungekudala ihlangana neziguli eziningi ezinesifo sikashukela sohlobo 2. ...
I-Subcutaneous Insulin Technique
I-algorithm yokwenza umjovo we-insulin we-insulin we-subcutaneous insulin. Ukulungiselela inqubo: 1. Zazise isiguli, sichaze isifundo nenhloso yenqubo. Qinisekisa ukuthi isiguli sivumile imvume yenqubo. 2. ...
Kukhiqizwa kuphi i-insulin futhi yini imisebenzi yako
Lapho kukhiqizwa khona i-insulin Ubhekene nesifo sikashukela, umuntu uvame ukuqala ukuzwa imibandela ehlukahlukene ephathelene nalesi sifo evela kodokotela. Enye yale ncazelo yi-insulin ye-hormone. ...
I-regimen yesifo sikashukela sikashukela
Ukwelashwa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lokuqala 1 Njengoba isifo sikashukela sohlobo 1 saziwa ngokushoda kwe-insulin ngokuphelele, ukwelashwa okufakwa esikhundleni se-insulin kwenziwa kuzo zonke izigaba zesifo. ...
I-Insulin Protafan: imiyalo, ama-analogues, ukubuyekezwa
Ukumelana ne-insulin: yini ebangelwa?
Kuyini ukumelana ne-insulin: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa kwe-Insulin ukumelana noma i-metabolic syndrome kuyinto evamile. Ngokusho kocwaningo, cishe ama-21% abantu abakhona ayathinteka eYurophu, kuthi angama-34% e-USA. ...
Isu lobuciko bokulawulwa ngobuqili be-insulin: imithetho, izici, amasayithi womjovo
Isu lobuciko bokulawulwa kokungena kwe-insulin: imithetho, izici, amasayithi wokujova Isifo sikashukela yisifo esibucayi, esingelapheki esihambisana nokuphazamiseka komzimba emzimbeni. Kungathinta noma ngubani, kungakhathalekile ngobudala nangokobulili. ...
I-Insuman® Basal GT
I-Insuman Basal GT - imiyalo esemthethweni yokusetshenziswa kwe-Insuman Basal GT 100 I.U./ml Inombolo yokubhalisa: P No. 011994/01 ye-26.07. ...
I-insulin yomuntu: yini etholakala kwabanesifo sikashukela. Lokho okwenziwe nge-insulin (ukukhiqiza, ukukhiqiza, ukukhiqiza, ukuhlanganisa) i-insulin yomuntu eyenziwe nge-genetically isisombululo somjovo wesifo sikashukela i-mellitus. ...
I-insulin engasebenzi emzimbeni iphakeme kushukela: kuyini?
Ukuhlaziywa kwe-IRI Ukuhlolwa kwe-insulin engasebenzi kahle kwenziwa ukuze kutholakale ikhwalithi yokukhiqizwa kwama-pancreatic hormone. Igama efushanisiwe kulokhu kuhlaziywa yi-Iran. ...
Umjovo we-insulin - kungani uyadingeka futhi ungayisebenzisa kanjani?
Kusha ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo 1 ngo-2017 - Ukwelashwa kwesifo sikashukela Izindaba ezilandelayo ekwelashweni kwesifo sikashukela ngo-2016 kulokhu zafika zivela e-Lincoln University. ...
Kwenziwa ini i-insulin kwabanesifo sikashukela: ukukhiqizwa kwanamuhla nezindlela zokuthola
Thayipha isifo sikashukela sohlobo 1 Ekwelapheni amalunga, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-DiabeNot. Ukubona ukuthandwa kwalo mkhiqizo, sinqume ukukunikeza ukunakwa kwakho. ...
Ingabe izinga lokushisa le-insulin yakho lilungile? Ucwaningo Ucwaningo lwakamuva olwenziwe ososayensi baseJalimane luveze ukuthi izinga lokushisa elingafanele le-insulin esiqandisini lingathinta ukusebenza kwalesi sidakamizwa. ...
I-Rosinsuline P (Rosinsuline P)
Imiyalo yokusetshenziswa kwe-insulin Rosinsulin R, M, C Rosinsulin uhlobo lwesakhi sehomoni olungakhiqizwa ngezinguqulo ezintathu ezahlukene, okuyilezi: C, P, noM. ...
UKUQALWA KWESIQINISO SE-INSULIN
Ukubalwa komthamo we-insulin ngaphambi kokudla Lokhu okulandelayo kuchaza ukubala imithamo ye-insulin esheshayo (emfushane ne-Ultra-iDemo) ngaphambi kokudla, kanye nezimo lapho udinga khona ukwehlisa ushukela wegazi ophakeme. ...
Kungani i-insulin inganciphisi ushukela wegazi ngemuva komjovo: yini okufanele uyenze?
Kungani kubalulekile ukujova ngendlela efanele? Abantu abane-hyperglycemia bavame ukubhekana nenkinga yokuthi i-insulin ayihlisi ushukela wegazi. ...
Izindlela eziphakeme ze-insulin zegazi
Izinga le-insulin ephezulu ye-glucose ejwayelekile: kusho ukuthini lokhu? I-insulin yi-hormone ebaluleke kakhulu emzimbeni womuntu; ngaphandle kwalokhu, ukusebenza okwanele kwezitho zangaphakathi nezinhlelo akunakwenzeka. ...
Yini engingayidla ngesifo sohlangothi nesifo sikashukela
Ukuchama ngokushesha kwesifo sikashukela
I-Trazhenta yezidakamizwa: imiyalo, ukubuyekezwa kwabanesifo sikashukela nezindleko
Izimpawu ze-glucose ephezulu (ushukela)
Izimpawu zikashukela wegazi eliphakeme kwabesifazane Ngokuvamile, abesifazane abangazizwa isikhumba esilukhuni benza izinwele zabo, baqale ukuguqula imikhiqizo yabo yokuhlanzeka ngaphandle kokuya kudokotela futhi bengasoli ukuthi bake bathola izimpawu zokuqala zoshukela wegazi ophezulu. ...
Ngabe uTebantin usetshenziselwa ini?
Yimuphi amamitha onembile kunazo zonke: ukuhlolwa nokuqhathaniswa kwentengo
Thayipha 2 isifo sikashukela
Imikhiqizo yabanesifo sikashukelaImpilo enesifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboUkwelashwa okuhlukileAma-sweetenersOkunyeAmanyikweIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniIzindlelaIsifo sikashukela
Yimuphi umshini okuvumela ukuthi unqume ushukela wegazi kubantu?
Okufanele ukwenze uma ushukela wegazi wehla: izindlela eziphuthumayo nezokuvimbela
Iziphuzo ezinotshwala engingaziphuza nesifo sikashukela sohlobo 2?
IFommetin noma iMetformin
Ukuxilongwa kwe-aortic atherosclerosis: enye indlela yokwelashwa - umnikelo obalulekile enhlalakahleni!
Yini eholela ekuhlolweni kwesifo sikashukela sohlobo 1 ezinganeni zethu?